Xa mhlophe i-american, oko kufuneka ndiyazi malunga dating a Mexican kubekho inkqubela. Mna anayithathela weva izinto ezininzi, kodwa andiqinisekanga ukuba babe izinto zonke echanekileyo. Quora
Njengoko i-mhlophe i-american, oko kufuneka ndiyazi malunga dating a Mexican kubekho inkqubela. Mna anayithathela weva izinto ezininzi, kodwa andiqinisekanga ukuba babe izinto zonke echanekileyo. Amaxabiso vary kakhulu ukususela iklasi ukuba iklasi, ngoko ke, xa yakho ekujoliswe kuyo kuba dating iya kuba i-ephezulu eliphakathi ukuya ephezulu iklasi umfazi, nazi ezinye iziphakamiso ukugcina engqondweni: – Abantu rhoqo ahlawule ityala ngexesha restaurant. Emva ezimbalwa imihla ngu, kulungile ukuba uthi ewe, kuye”Sangokuhlwa ngu kwi nani kodwa mandiyenze kuhlawulelwe dessert umkhenkce cream iimifanekiso kweli xesha”proposal. Ngokwenene, xa yena pronounces loo mazwi, uyazi yena u-a keeper. Akukho ngesondo kwi yokuqala, yesibini okanye yesithathu umhla. Xa Mexican abantu ufuna ngenye imini hookups, babe hamba amalwandle ukuhlangabezana abanye”gringas”. Kengoko umhla kuba ngesondo. Ngesondo iqala xa ufaka kwi-i-esemthethweni budlelwane. Kwezinye ngakumbi conservative izangqa, ngesondo akuthethi ukuba ingene dlala de ungummi”steady”boyfriend. Ingcamango”ukulinda de umtshato”uhambe. Yakho manners kwi-ithebhule zibalulekile. Musa ukwenza noises ngexesha amehlo, chew kunye umlomo wakho ivaliwe, musa ukuthetha ude ube swallow, kudla siphantsi.
Nkqu ukuba unayo i-PhD kwaye yenza izigidi, ukuba uya kudla ngathi i-uneducated umlimi uya dumped. Intlanganiso yayo abazali akuthethi ukuba kuthetha nani zinikelwe ukuba nantoni na. Musa freak phandle ukuba yena ufuna ukuba ahlangane yakhe abazali, abantwana bakokwenu kwaye okanye bubonke usapho. Oku akuthethi ukuba zithetha yena ufuna a wedding.
Ukuba ufuna umhla a materialistic omnye, ewe, yena uya silindele okokuba. Kodwa kuba baninzi uninzi educated abafazi ndiyazi, asiyonyaniso leyo. Ngokwenene, babe kuba tendency ukuyonakalisa kwenu, kuxhomekeke usapho lwabo dynamics. Abanye educated abafazi bevela iintsapho apho umama usoloko usebenza wonke umntu ongomnye kuqala. Ukuba ufuna umhla omnye abo ukusuka esiqhelekileyo upbringing, yena uya kufumana yakho ngakumbi balanced indlela kule kakhulu kukuhlaziya. Umboniso oku: Ngomhla omnye wenu imihla, wena cook isidlo sasemini kunye, nina kunye yenza itheyibhile, wena kunye coca phezulu mess, kwaye wena ugqiba ngokwenza the dishes.
Yena uya ukuba UTHANDO
Ngokubanzi inyaniso, phezulu ukuya ezithile ubudala. Ukuba ufuna umhla nabani na ubudala kunokuba amabini anesithandathu ukuba ngxi ubomi abayo abazali, ndikunqwenelela ithamsanqa kwixesha lonto.
Uza kuba okruqukileyo ukuba ukufa
Ngaba ngcono jonga geqe kwaye educated abafazi, baya kuba kakhulu ngakumbi fun. -“Ungathi kuthenga iintyatyambo, kufuneka ube creative, zama nzima, kwaye ingaba mnandi izinto kuba nabo, kufuneka siphendule kuye wagqitywa ngokukhawuleza, ekubeni super corny babe ukwamkeleka”Hayi, hayi, hayi, hayi, hayi, kuba yokugqibela omnye Hayi. Ingakumbi kuthenga iintyatyambo kwaye kuba super corny AKUKHO nceda hayi. Njengoko kuzo zonke ezinye inkcubeko, yena uya yonke imihla ufuna ukuba uzama kakhulu nzima, yena uya ukuba ongazange waba a girlfriend ukuba ufaka corny, kwaye yena ingaba mhlawumbi ufuna ukuchitha imali yakho ekubeni fun kwe kwi abafileyo iintyatyambo rotting endaweni ethile (iintyatyambo ziduru kule endleleni, kwaye kuphela yokuzithenga kuba imingcwabo kunye esibhedlele utyelelo)
← Kwi-intanethi Dating kwi-Mexico, Bahlangana abantu
Mexico Abantu, Emexico Omnye Abantu, Emexico Guys, Emexico Omnye Guys →